China agba Acryli Akwụkwọ & Agba Plexiglass ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Donghua
Colored Acrylic Sheets & Acha Plexiglass, Acryli Plastic Ibé akwụkwọ
Akara acrylic na-acha (plexiglass) dị arọ, na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọgwụ, ma na-enye ọtụtụ àgwà mara mma. Ndị aacrylic sheets ndị dị mfe na-echepụta, nwere ike glued, laser ịkpụ, gbapuru, kanyere, na-egbu maramara, kpụ ọkụ n'ọnụ na hulatara na akụkụ dị iche iche, ha na-enyere anyị aka ịmepụta ụdị ọ bụla na agba ọ bụla n'ime ngwaahịa na-adọrọ adọrọ.
Dhua na-enye ọtụtụ akwụkwọ agba agba nke nwere agba Plexiglass Acrylic. Ọkọlọtọ nwere agba gụnyere ọbara ọbara, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ, odo odo, nwa, ọcha na ụdị agba dị iche iche. All nwere ike ebipụ-na-size na-ọma ruru eru maka laser ọnwụ, nke na-eme ationgha nke ihe ịrịba ama, ebe-nke-zụrụ ngosipụta, na ọkụ aghụghọ mfe na oru oma.
Aha ngwaahịa Acha acrylic acha- "PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, acryli, Plexiglas, Optix"
TỌrịa 0.8 0.8 - 10 mm (0.031 na - 0.393 na)
Agba Red, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ, odo odo, nwa, ọcha ọcha. Omenala agba dị
Nkà na ụzụ Usoro mmepụta ihe
MOQ Mpempe akwụkwọ 300
Nnyefe Oge 10-15 ụbọchị mgbe iji nkwenye
DHUA Hdika Cgbanyere olu Akristal Sheets Aodi n'ime Custom Sizes na Hues
DHUA omenala nwere acrylic mpempe akwụkwọ ngwaahịa bụ nke emere, ihe eji achọ mpempe akwụkwọ eji achọ mma ma dị n'ọtụtụ agba.
Anyị na-enye agba plexiglass acrylic sheets na ọtụtụ ụdịdị dị iche iche nke transperent, translucent, na opaque agba.
Mpempe akwụkwọ acrylic dị ọtụtụ na ebumnuche nwere ọtụtụ ọrụ, extruded acrylic mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche n'ọtụtụ ebe obibi, azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ndị ọkachamara.
Akara, Mbido ngosi
Ubi ogige & ihe ndozi ụlọ
Ogwe nzuzo nkebi
Light panel ekpuchi
Ndabere backlit, ihe eji achọ mma
acrylic agba akwa
acrylic mpempe akwụkwọ na agba
acrylic mpempe akwụkwọ ahịa
black acrylic mpempe akwụkwọ
acha acrylic plexiglass mpempe akwụkwọ
yi acrylic mpempe akwụkwọ
extruded acrylic mpempe akwụkwọ
acha ọcha acrylic mpempe akwụkwọ